နှင်းလျောစီးမျက်မှန် | အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်အကောင်းဆုံးကိုရွေးပါ - ULLER
ယခုနှင်းလျှောစီးရာသီရောက်လာပြီ၊ မည်သည့်အရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကိုစဉ်းစားရမည့်အချိန်ဖြစ်သည် နှင်းလျောစီးမျက်မှန် ငါတို့စျေးကွက်ထဲကိုရနိုင်တယ်
ငါတို့နှင်းများကိုချစ်တယ် သင်၏ဘုတ်ပေါ်ရှိလမ်းကြောင်းပေါ်သို့လျှောဆင်းခြင်း၊ သင်၏အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်များနှင့်မိုthe်းပွင့်များအပေါ်စီးဆင်းစေခြင်းများကဲ့သို့ဘာမျှမရှိပါ။ မင်းမသိဘူးဆိုရင်သူတို့ကပထမစားပွဲလို့ပြောကြတယ် နှင်းလျော ၎င်းကို ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင်မီရှီဂန်ရှိမူကေးဂွန်မှအင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး ဖြစ်သူ Sherman Poppen မှတီထွင်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့တွင်နှင်းနှစ်ခုတပ်။ ချည်နှောင်ရန်သူ၏သမီးများအားပေးခဲ့သည်။ ထိုအခြိနျကာလမှ စ၍, အားကစားသမားများအကြားတိုးပွားလာသောအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှအစွန်းရောက်အားကစားအဖြစ်နှစ်များတစ်လျှောက်လူကြိုက်များလာခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၁၅ အထိအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်၌ပါဝင်ခဲ့ပြီးယနေ့တွင်ရှိခဲ့သောနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုခံယူခဲ့သည်။
ယနေ့ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိလူသန်းပေါင်းများစွာတို့သည်ယင်းကိုကျင့်သုံးကြသည် နှင်းလျော ပညာရှင်ပီသစွာနှင့်ထို့နောက်သန်းပေါင်းများစွာသည်လာရောက်လည်ပတ်ရန်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည် အစက်အပြောက် အမျိုးသားအဆင့်နှင့်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် နှင်းလျော.
သို့သော်ရဲရင့်သောအမျိုးသားများ (ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသို့မဟုတ်အစပြုသူများ) တွင်တူညီချက်တစ်ခုမှာတစ်ခုမှာတစ်ခုဖြစ်သည် - သူတို့ဘုတ်အဖွဲ့၊ သူတို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းများကိုအမြဲသယ်ဆောင်သည်။ နှင်းလျောစီးမျက်မှန်. ၎င်းတို့သည်လျောက်ပတ်သောဘွတ်ဖိနပ်များ၊ အပူအ ၀ တ်အစားများ၊ လက်အိတ်များ၊ မျက်နှာဖုံးများနှင့်သင့်တော်သောဘုတ်ကိုသုံးရန်အလွန်အရေးကြီးသည် နှင်းလျောစီးမျက်မှန် အကာအကွယ်နှင့်အရေးယူသို့စွဖို့သတ္တိတွေအများကြီး။
၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးနေပုံရသော်လည်းအမှန်တကယ်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ငါတို့ရွေးချယ်တဲ့အခါ နှင်းလျောစီးမျက်မှန် အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုရွေးချယ်ရန်သင့်အားကူညီမည့်သော့ချက်အချိန်သုံးချက်ရှိသည်။
သင်သည်စနိုးဘုတ်စီးခြင်းလောကသို့ဝင်ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်သင်၏မျက်မှန်ဟောင်းများကိုပိုမိုကောင်းသောအရာများဖြင့်အစားထိုးလိုပါကနောက်လာမည့်အချိန်တွင်သင်ဝယ်ယူရန်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးပုံသေနည်းရှိသည်။ နှင်းလျောစီးမျက်မှန်။ အဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့်သင့်ကိုရွေးချယ်ပါ။
အကောင်းဆုံး SNOWBOARD Glasses ရွေးချယ်ဖို့သော့ချက်
၎င်းသည်မည်သူ့ကိုမျှလျှို့ဝှက်ခြင်းမဟုတ်ပါ - ၎င်းသည်မျက်လုံးကာကွယ်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည် နှင်းလျောစီးမျက်မှန်။ ၎င်းသည်သင်၏အမြဲတမ်းသယ်ဆောင်ရသည့်အဓိကကျသောအကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်၎င်းကိုသင်ဝယ်ယူသောအခါသင်ကြည့်ရှုသင့်သည့်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင့်အားအမှန်တကယ်ကာကွယ်ရန် 99% သို့မဟုတ် 100% နေရောင်ကာကွယ်မှုရှိပါကဖြစ်သည်။
UV-400 ကာကွယ်မှုရှိကြောင်းအမြဲစစ်ဆေးပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ နှင်းလျောစီးမျက်မှန် ၄ င်းတို့သည်မည်သည့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုမဆိုနာနိုမီတာ ၄၀၀ ထက်နည်းသောလှိုင်းအလျားဖြင့်ပိတ်ဆို့လိမ့်မည်။ သူတို့၏ filter သည်သင့်အား UVA နှင့် UVB ရောင်ခြည်များမှကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်နှင်းဖုံးဒေသများ၌အထူးသဖြင့်ဆောင်းရာသီတွင်နေ၏နေ၏အနေအထားနိမ့်ကျသောကြောင့်နှင်းဖုံးဒေသများ၌တောက်ပသောအလင်းပမာဏအလွန်များပြားသည်။ ရောင်ခြည်များသည်ဤအခြေအနေများအောက်ရှိမျက်လုံးများကိုအန္တရာယ်ရှိသောအလိုဆန္ဒများဖြင့်ပုံဖော်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာဖုံးကိုမဝတ်ပါကသို့မဟုတ်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ နှင်းလျောစီးမျက်မှန် လုံလောက်သော။
ထိုနည်းတူစွာ၊ ဤအခြေအနေများအောက်ရှိနှင်းများသည်သိပ္ပံနည်းကျပြောသောအလင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ အကြောင်းကတော့အဖြူရောင်သည်အလင်းကိုစုပ်ယူခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းကိုတွန်းကန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်နှင်းနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခြင်းသည်သင်တောက်ပမှုနှင့်ထောင့်အမျိုးမျိုး မှနေ၍ သင်တောက်ပမှုကိုရိပ်မိစေသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုယခင်ကထက် ပို၍ ကာကွယ်ရမည် နှင်းလျောစီးမျက်မှန် သို့မဟုတ်အရည်အသွေးနှင်းလျှောစီးမျက်နှာဖုံးများ။
သင်၏စဉ်းစားဆင်ခြင်ရန်လည်းအရေးကြီးသည် နှင်းလျောစီးမျက်မှန် သူတို့သည်သင့်အားမှန်ကန်စွာအကာအကွယ်ပေးရန် ISO စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပြီးသူတို့သည်ဥရောပလုံခြုံရေးစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသော CE ၏ထောက်ခံချက်ကိုခံယူကြသည်။
အ နှင်းလျောစီးမျက်မှန် သူတို့သည်သင်၏မျက်လုံးများကိုနေရောင်ခြည်မှကာကွယ်ပေးရုံသာမကဆီးနှင်းတစ်လျှောက်လျှောကျနေစဉ်သင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လည်းသင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်၊ အကောင်းဆုံးအတွဲကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည် နှင်းလျောစီးမျက်မှန်ငွေအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ သူဝတ်ဆင်သည့်မျက်ကပ်မှန်များကိုအမြဲတမ်းဒီဇိုင်းနှင့်အရောင်မှအမျိုးအစားအထိအာရုံစိုက်သည်။
- အရောင်အရသိရသည် -
နှင်းလျောစီးမျက်မှန် အများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်အားကစားအတွက်တိုးတက်ဖို့ကူညီအနည်းငယ်သောဖြစ်ကြသည်။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်အရောင်ရွေးချယ်စရာများစွာကိုတွေ့လိမ့်မည်သင်ရွေးချယ်သောသူတို့ကိုငါကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးပါလိမ့်မယ်? သူတို့ကွဲပြားလိမ့်မည်နည်း အမှန်တရားကတော့သူတို့ဟာမတူကွဲပြားတာတွေ၊ ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတာကြောင့်လျှောဆင်းတဲ့အခါသင်ပိုမြင်သာနိုင်တာပါ။ သင်၏အကောင်းဆုံးနှင့်ကိုက်ညီသောအရောင်များအကြောင်းအနည်းငယ်လေ့လာပါ နှင်းလျောစီးမျက်မှန်!
တောက်ပမှုနိမ့်သောအခါ၎င်းတို့ကိုအကြံပေးသည်။ နေဝင်ချိန် (သို့) နေထွက်ချိန်မှာနှင်းလျှောစီးတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြူတွေရှိနေရင်၊ ဒါမှမဟုတ်နေ့တွေမှာတိမ်ထူထပ်နေတယ်၊
၎င်းသည်အဝါရောင်မှလာသည့်အရောင်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အလင်းနည်းနည်းဖြင့်တိမ်ထူထပ်သောနေ့များအတွက်လည်းညွှန်ပြသည်။ သို့သော်၊ ဤမှန်ဘီလူးအရောင်သည်သင်၏မျက်လုံးများမြင်တွေ့ရသောအရောင်ကွာခြားမှုကိုတိုးမြှင့်စေသည်။
အ နှင်းလျောစီးမျက်မှန် အနီရောင်အရောင်များသည်မျက်လုံးပင်ပန်းမှုကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေပြီးသင့်အားအရောင်များ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့်အပြင်သင့်အားအလွန်ကောင်းမွန်သောအတိမ်အနက်ကိုပေးသည်။ သင်ရွေးချယ်သောဤမှန်ဘီလူးအရောင်သည်အထူးသဖြင့်နှင်းဖုံးပတ်ဝန်းကျင်ရှိအားကစားမျက်မှန်များနှင့်မျက်နှာဖုံးများအတွက်အပြင်လမ်းမအားကစားအတွက်လည်းအထူးသင့်လျော်သည်။
အ နှင်းလျောစီးမျက်မှန် အပြာမှန်ဘီလူးများဖြင့်၎င်းတို့ကိုနေသာသောနေ့ရက်များအတွက်အကြံပေးလိုသော်လည်း၎င်းကိုတိမ်ထူထပ်သောနေ့များတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ The နှင်းလျောစီးမျက်မှန် အပြာမှန်ဘီလူးများဖြင့်သူတို့သည်မြင်ကွင်းကျယ်၏“ အအေး” အမြင်ကိုမြင်တွေ့ရပြီး၎င်းနှင့်အတူနေမှပူနွေးသောသို့မဟုတ်အဝါရောင်အလင်းများကိုတန်ပြန်ရန်နှင့်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်သောမျက်စိပင်ပန်းမှုကိုလျှော့ချပေးသည်။
အ နှင်းလျောစီးမျက်မှန် သူတို့သည်ခရမ်းရောင်မှန်ဘီလူးများဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအလင်း၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများမှလာသည့်ပိုလျှံသောပိုလျှံသောမီးထည်ကိုလျော့ချရန်ရည်မှန်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ဝယ်ယူ နှင်းလျောစီးမျက်မှန်ခရမ်းရောင်မှန်ဘီလူးများဖြင့်သင်၏နက်ရှိုင်းသောလယ်မြင်ကွင်းနှင့်သဘာဝတရား၏အရောင်များကိုသင်၏အမြင်ကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။
မီးခိုးရောင်မှန်ဘီလူးများသည်အမြင့်ဆုံးအလင်းပမာဏကိုလျှော့ချပေးသဖြင့်၎င်းတို့ကိုနေသာသောနေ့များနှင့်တစ်နေ့တာအထွတ်အထိပ်နာရီများတွင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအစစ်အမှန်အရောင်များကိုပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်သင့်အားကူညီသည်။
အထူးသဖြင့်ဆောင်းရာသီအားကစားများတွင်လေ့ကျင့်ချိန်၌အမြန်နှုန်းနှင့်ရွေ့လျားမှုများစွာပါ ၀ င်သည်။ သူတို့ကမျက်လုံးဝန်းကျင်ရှိအရာဝတ္ထုများကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ရန်ကူညီပေးပြီးသူတို့၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်ခြားနားချက်များကိုခွဲခြားရန်ကူညီသည်။ ဒီမော်ဒယ် နှင်းလျောစီးမျက်မှန် အလွန်ထူထပ်သောနေ့များ၌အမြင်အာရုံကိုလျော့နည်းစေသည်။
-အဆိုအရ အခြေခံအကျဆုံး -
အကောင်းဆုံး နှင်းလျောစီးမျက်မှန် နေရောင်နှင့်ရာသီဥတုနှစ်မျိုးလုံးတွင်သင့်ကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ မှန်ဘီလူးအမျိုးအစားကိုသာအသုံးပြုမှသာ။ သူတို့ကိုသင်သိပြီးပြီလား အရည်အသွေးမြင့်မားသောမျက်မှန်များသည် CAT0 မှ CAT4 အထိအလင်းပြန့်ပွားမှုကိုဖြစ်စေသို့မဟုတ်အနိမ့်အတိုင်းအတာအထိဖြတ်သန်းသွားလျှင်ဖြစ်စေအမျိုးအစားညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြင့်လာသည်။ ဤကိစ္စတွင်အမျိုးအစား0သည်အပေါ့ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ၄ သည်အမှောင်ဆုံးဖြစ်သည်။
လက်တွေ့ကျကျပွင့်လင်း။ ၎င်းတို့သည်အရောင်မရှိသို့မဟုတ်အလွန်ပေါ့ပါးပြီးပျော့ပျောင်းသောအရောင်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်း၏အလင်းထုတ်လွှင့်မှုသည် ၈၀% မှ ၁၀၀% အထိစစ်ထုတ်သည်။
အလင်းအရောင်နှင့်တောက်ပမှုကိုလျှော့ချသည့်အခါအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးသောညနေခင်း၊ နေထွက်ချိန်နှင့်မိုးအုံ့နေသည့်အချိန်များ။ ၎င်း၏ ၄၃% မှ ၈၀% အထိအလင်းထုတ်လွှတ်သည်။
သူတို့ကအလယ်အလတ်မှောင်မိုက် crystals ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်း၏အလင်းထုတ်လွှတ်မှုသည် ၁၈% မှ ၄၃% အထိရှိကာအလယ်အလတ်တောက်ပမှုအတွက်ပြသခဲ့သည်။
၎င်းသည်နေရောင်နှင့်အမြင့်ဆုံးအချိန်များတွင်သက်သာခံစားရရန်လုံလောက်သောမှောင်မိုက်သောအရောင်ရှိသည်။ ၎င်း၏အလင်းထုတ်လွှတ်မှုသည် ၈% မှ ၁၈% သို့စစ်ထုတ်သည်။ အလင်းအားပြင်းထန်မှုသည်အလယ်အလတ်နှင့်ပြင်းထန်သောအချိန်တွင်၎င်းတို့သည်သင့်အားပြင်ပအားကစားများအတွက်အကောင်းဆုံးသောအမှောင်ထုကိုပေးသည်။
ဤပုံဆောင်ခဲများသည်မှောင်မိုက်သည်။ တကယ်တော့သူတို့ကိုကားမောင်းဖို့ခွင့်မပြုဘူး။ ၎င်းတို့ကို Category3မှန်ဘီလူးများမလုံလောက်သည့်အခြေအနေများတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ထုတ်လွှင့်မှုနှုန်းသည် ၃% မှ ၈% အထိရှိကာအမျိုးအစားအားလုံးအနက်အမှောင်ဆုံးဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား 1 နှင့်အမျိုးအစား3သည်သင်တွေ့ကြုံရသောရာသီဥတုအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ နှင်းလျှောစီးရာတွင်အသုံးပြုရန်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးနိုင်သည့်သံလိုက်မှန်ဘီလူးများဖြင့်စကတ်ထူပြားများပါ ၀ င်ပါက ပို၍ ကောင်းသည်။
သင်ရွေးချယ်ရန်အကြံပြုလိုသည် နှင်းလျောစီးမျက်မှန်ယခုအချိန်တွင်သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည့်မှန်ဘီလူးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်သောအပြန်အလှန်လဲနိုင်သောသံလိုက်မှန်များဖြင့်ဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုအခြေအနေသည်တစ်မိနစ်မှနောက်တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည် နှင်းလျောစီးမျက်မှန် အဲဒါကဒီအားသာချက်ပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကသူတို့ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းပြောင်းပြီးမှန်ကန်သောအရာကိုသုံးလို့ပဲ။
နှင်းလျှောစီးခြင်းသို့မဟုတ် နှင်းလျော သူတို့ဟာအလွန်အမင်းအလေးအနက်ထားသင့်ကြောင်းအစွန်းရောက်နှင့်စွန့်စားမှုအားကစားဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပျော်ရွှင်မှုနှင့် adrenaline တို့၏အကောင်းဆုံးအချိန်များကိုအာမခံရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုလိုအပ်သည်။
3. ပစ္စည်းများနှင့် fit
သင့်အတွက်သင်ရွေးချယ်သောပစ္စည်းသည်အမြဲတမ်းသတိရပါ နှင်းလျောစီးမျက်မှန် သင်၏မျက်နှာပေါ်တွင်ကောင်းမွန်သောအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမှုသည်နေရောင်ခြည်ကိုသာမကယေဘုယျအားဖြင့်အိမ်အပြင်၌သူတို့၏ကာကွယ်မှုကိုမှန်ကန်စွာဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်ဟုအာမခံသည်
သင်၏မျက်နှာကိုမှန်ကန်စွာကိုက်ညီသောနှင်းဖုံးမျက်မှန်တပ်ခြင်းရွေးပါ။ သင်၏မျက်နှာနှင့်သံခမောက်လုံးတွင်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ရန်၎င်းတို့တွင်စလစ်တိပ်ခွေများရှိရမည်။ ထို့အပြင်၊ သူတို့သည်သင့်မျက်နှာပြင်အမြင်အာရုံကိုအပြည့်အဝဖုံးအုပ်နိုင်ရန်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်နယ်မြေများအပါအ ၀ င်သင်၏မျက်နှာကိုမှန်ကန်စွာကိုက်ညီရန်အရေးကြီးသည်။
အလင်းနှင်းလျောစီးမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး။ အဘယ်အရာကိုပစ္စည်းကိုကြည့်ပါ နှင်းလျောစီးမျက်မှန်။ ဥပမာပြရမည့် thermoplastic polyurethane ကိုရွေးချယ်ပါ၊ ၎င်းသည်သင့်အားအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ပေါ့ပါးမှုကိုရရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။
“ Anti-Fog” စနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ "Antifog"။ သင့်ရဲ့ နှင်းလျောစီးမျက်မှန် ဆီးနှင်းများလျှောကျနေစဉ်မြူမှုန်မှိုင်းခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်၎င်းတို့တွင်ဤစနစ်ရှိသည်။
အတွင်းလေဝင်လေထွက်စနစ်ဖြင့်နှင်းလျောစီးကာမျက်မှန်တပ်ထား။ အကောင်းဆုံးကတော့သူတို့မှာ anti-condensation နည်းပညာရှိတယ်။ ၎င်းသည်လေကိုပိုမိုမြင်သာစေရန်အတွက်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးသည်။
အခုတော့သေချာဘို့သင်ပိုမိုသက်သာခံစားရနှင့်စွန့်စားမှုပျော်မွေ့ရန်ပြင်ဆင်ထားသည် နှင်းလျော ဒီရာသီကာလအတွင်း။ ဤအဆင့် ၃ ဆင့်ကိုစိတ်ထဲထားပြီးသင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည် နှင်းလျောစီးမျက်မှန် အားကစား၏ adrenaline ခံစားရရန်ပိုမိုသင့်လျော်။ အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပြီးသင်လေ့ကျင့်သည့်အခါသင်၏ရူပါရုံကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အခမဲ့ခံစားရသည် နှင်းလျော! ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာပြီးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လာပါ နှင်းလျောစီးမျက်မှန်။
ကြောက်စရာကောင်းသော Monte Zocolan သည် ၉.၈ ကီလိုမီတာအထိမြင့်တက်သွားပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ဘီးစီးသူများပင်သူတို့၏ခြေထောက်များကိုလောင်ကျွမ်းသည်ဟုခံစားရသည်။ ဤတောင်သည်ထိုပုံစံကိုဖြတ်သန်းရန်အခက်ခဲဆုံးတောင် ၁၀ ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်